नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : कालले पनि राम्रा मान्छेलाई नै खोज्दो रहेछ, लैजानुपर्ने लाई लैजादैन नलैजानुपर्ने लाई लैजान्छ ! असल काङ्रेसी नेता भीम बहादुर तामाङको दु:खद निधन, उनी प्रती हार्दिक श्रद्धा सुमन
कालले पनि राम्रा मान्छेलाई नै खोज्दो रहेछ, लैजानुपर्ने लाई लैजादैन नलैजानुपर्ने लाई लैजान्छ ! असल काङ्रेसी नेता भीम बहादुर तामाङको दु:खद निधन, उनी प्रती हार्दिक श्रद्धा सुमन
कांग्रेसले सिद्धान्तनिष्ठ, इमान्दार र व्यवहारवादी एक नेतालाई आज देखि गुमाएको छ । बिहान ‘मर्निङ वाक’ गरेर कोठामा फर्केका नेता भीमबहादुर तामाङ अब रहेनन् । आफ्नो आदर्श प्राप्तीका लागि बन्दुक देखि शान्तिको झण्डा बोकेका तामाङ समकालीन राजनीतिमा एउटा आदर्शवादी नेताका रुपमा समेत चिनिन्छ ।
तामाङले वीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै सबैभन्दा ठूलो समावेशी दर्शन हो भन्ने स्पष्ट मान्यता
राख्दै आएका थिए । जातीय र क्षेत्रीय भावनाका आधारमा समाजमा बिग्रह ल्याउन नदिन आफू मर्नु अघि सम्म पनि क्रियाशील नेता गुमाउँदा कांग्रेस र शुभेच्छुकले ठूलो रिक्तता महशुस गरेका छन् ।
जातीय सद्भाव र बलियो राष्ट्रिय एकताका पक्षमा खरो रुपमा उत्रिने तामाङ सधै सबैका लागि प्रेरणा स्रोतका रुपमा रहे । तामाङले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन प्रजातान्त्रिक समाजवाद प्राप्तीका लागि अर्पीए ।
दोलखा जिल्लाको झले गाविसमा विक्रम संवत १९९२ सालमा जन्मीएका तामाङ २०१४ सालमा कांग्रसमा आबद्ध भएका हुन् ।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिई लोकतन्त्र खोसेपछि सुर्बण शम्शेर राणाले चलाएको सशस्त्र क्रान्ति र २०२८ सालमा वीपी कोइरालाको आव्हानमा भएको अर्को क्रान्तिमा तामाङले बन्दुक बोकेर होमिए ।
त्यसक्रममा उनले वीपी कोइरालाको अंगरक्षकको जस्तो भूमिका पनि निर्वाह गरेको समकक्षीहरुको भनाई छ । उनको राजनीतिक इमान्दारीतालाई मनपराएर वीपीले नजिक राखेका हुन् । क्रान्तिकारी छबि बोकेका तामाङ कांग्रेस भित्र अध्ययनशील र योगदान गर्ने नेताका रुपमा स्थापित थिए ।
वीपी कोइरालाको निकटमा रहेका उनको जीवनयापनमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी चिन्तनको छाप प्रष्ट देखिन्छ ।
वीपी कोइरालासँगै लामो समयसम्म भारत निर्वासमा रहेका उनी २०३६ सालको जनमतका क्रममा नेपाल फर्के । जानकारहरुका अनुसार वीपी कोइरालाले तामाङलाई कुनै दस्तावेज वा लिखत अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्नका लागि जिम्मेवारी पनि गर्दथे ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समर्पित नेता तामाङले पछिल्लो समयमा देशमा सामाजिक सद्भाव बिथोलिन नदिन गम्भीरतापूर्वक आफूलाई प्रस्तुत गरे ।
कांग्रेसले उनलाई आदिवासी जनजातिहरुको मुद्दा सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने सुझाव र गृहकार्यका लागि समिति गठन गरेर जिम्मेवारी दिएको थियो ।
सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध तामाङ लोकतान्त्रिक समाजवादको छाहारीमा सबै अटाउँछन् र त्यसरी अटाउँदा मानवजातीको कल्याण हुन्छ भन्ने मान्यतामा अडिक रहेका थिए ।
नेता तामाङले यस अघि भएको कांग्रेसको महाधिबेशनमा सभापतिका लागि उम्मेदवार पनि दिए । माहाधिबेशनमा उनले आफ्नो उम्मेदवारी जितका लागि भन्दा पनि आफ्ना मुद्दा पार्टीमा स्थापित गराउन लागेको प्रतिक्रिया तत्कालीन समयमा दिएका थिए ।
उनको सादा जीवन, सरल र पारदर्शी जीवनशैली समकालीन नेपाली राजनीतिमा नमूनाका रुपमा लिइन्छ ।
राजनीतिमा कहिलेकाँही अप्रिय निर्णय पनि लिनसक्नु पर्दछ र ‘एन्टी करेण्ट’मा उभिन सक्नु पर्छ भन्ने वीपी कोइरालाको भनाइबाट प्रभावित देखिने तामाङ देशमा जातीय भावना फैलदै गर्दा त्यसको विपक्षमा उभिएर जातीय सद्भाव तथा बलियो राष्ट्रिय एकताका पक्षमा देखिए । सो कार्यले उनको राजनीतिक व्यक्तित्वलाई अझ उचाई प्रदान गरेको छ ।
तामाङ नेपालमा जातीय सद्भाव र बलियो राष्ट्रिय एकता चाहनेहरुका निम्ती सधै प्रेरणाका स्रोतका रुपमा रहे । उनलाई कांग्रेस भित्र सत्य बोल्ने नेता पनि भन्ने गर्दछन् ।
मन्त्रीसमेत भएका कांग्रेस नेता तामाङ राजधानीमा आजीवन भाडाको घरमा जीवन विताए । पछिल्लो समय उनी कांग्रेसका पूर्व सभासद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्यम अधिकारीको घरमा भाडामा बस्दै आएका थिए ।
लोभलालच नगर्ने नेता तामाङको निधनबाट कांग्रेसले मात्रै नभई समग्र मुलुकले योग्य र सक्षम नेता गुमाएको छ । एक छोरा र छोरी छन् ।
आज बिहान मर्निङवाकबाट फर्कनासाथ असजिलो महसुस गरेपछि संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले हतार-हतार गाडीमा हालेर नर्भिक अस्पताल ल्याउँदा ल्याउँदै बाटैमा नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता भीमबहादुर तामाङको निधन भयो । बाचुन्जेल कसैलाई दुःख नदिएका ७८ वर्षीय नेता तामाङको मरन पनि सहजै भयो । तानाशाही राणा शासनकालमा दोलखाको झुले गाविसको जनजाति परिवारमा जन्मेका कांग्रेस नेता भीमबहादुर तामाङलाई उनको जन्मस्थलतिर अझैसम्म मानिसहरु ‘मास्टर भीमबहादुर’ भन्ने गर्छन् । ००७ सालको क्रान्तिपछि ०१७ सालसम्म भीमबहादुरले दोलखाका ग्रामीण भेगमा शिक्षाका लागि पुर्‍याएको योगदानका कारण उनको नाम ‘मास्टर भीमबहादुर’ रहेको हो ।
‘उहाँले ००७ सालपछि झुमेदेखि जिरीसम्मका विभिन्न गाउँमा निशुल्क शिक्षा दिने ध्येययले विद्यालयहरु खोल्नुभयो । उहाँ एकैदिन ४/५ वटा गाउँमा पढाउन जानुहुन्थ्यो, पछि आफैंले पढाएका युवाहरु शिक्षक भएर निस्केपछि उहाँलाई सहयोग भयो । दोलखाका दुर्गम गाउँमा त्यो बेला शिक्षाको ज्योति फैलाउन उहाँको ठूलो योगदान रहेको छ ।’- भीमबहादुरलाई नजिकबाट चिन्ने कांग्रेस कार्यकर्ता बर्मा लामाले अनलाइनखबरसित भन्नुभयो । नेपालमा शिक्षाको अवस्था ज्यादै पछाडि रहेको सो समयमा जनजातिहरुलाई शिक्षाको ज्योति फैलाउने तामाङको भूमिकालाई उदाहरणीय मान्न सकिन्छ ।तत्कालीन राजा महेन्द्रले ०१७ सालमा प्रजातन्त्रमाथि ‘कू’ गरेपछि ‘मास्टर भीमबहादुर’ को जिन्दगी एकाएक ‘क्रान्तिकारी भीमबहादुर’ मा परिणत भयो । ‘मास्टर भीमबहादुर’ले त्यसपछि जेल र निर्वासनमै आफ्नो जीवनका ३० वटा बसन्तहरु गुजार्नुभयो ।
विसं ०१८/०१९ सालमा नेपाली कांग्रेसले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष छेडेको थियो । सो संघर्षमा तामाङले ओखलढुंगा, उदयपुर र सर्लाही लगायतका जिल्लामा सक्रिय भूमिका खेल्नुभयो । सो सशस्त्र संघर्षमा तामाङ एक्लैले १७ वटासम्म बन्दूक बोकेको स्मरण गर्छन् कांग्रेस नेताहरु ।
निर्वासनमा बस्दा तामाङ लामो समय वीपी कोइरालाको निकटमा हुनुहन्थ्यो । साथै कांग्रेसका सहीद सरोज कोइरालासँग पनि वहाँ लामो समय सँगै बस्नुभएको थियो ।
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई ०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा तामाङ पराजीत हुनुभएको थियो भने ५१ को मध्यावधि चुनावमा जीतेर सांसद तथा कानूनमन्त्रीसम्म बन्नु भएको थियो । ०६४ को संविधानसभा चुनावमा उहाँ पराजीत हुनुभएको थियो । चुनावमा राम्रा मान्छेले चुनाव जित्छन् नै भन्ने ग्यारेन्टी हुन्न भन्ने राजनीतिशास्त्रीले दिने गरेको दृष्टान्त भीमहादुरमा पनि लागू भयो ।
बाँच्दा पनि एक्लै, मर्दा पनि एक्लै
श्रीमती, एक छोरा र एक छोरीका धनी भएता पनि भीमबहादुर नितान्त एक्लै हुनुहन्थ्यो । लामो निर्वासित जीवनकै क्रममा श्रीमतीले वहाँलाई छाडेर अर्कैसित पुनर्विवाह गर्नुभयो भने एकमात्र छोरासँग उहाँको सम्बन्ध धेरै अघि नै टुटिसकेको थियो । छोरी आफ्नै घरजममा रहेको र छोरासित उठबस नभएका कारण वहाँ काठमाडौंमा एक्लै बस्नुहुन्थ्यो । संविधान्विद् राधेश्याम अधिकारी भीमबहादुरका लागि छोरासरह हुनुहन्थ्यो र उहाँले तामाङका लागि लामो समयदेखि आफ्नै घरमा आश्रय दिनुभएको थियो । तामाङको डेराबाहेक व्यक्तिगत सम्पत्ति केही थिएन । वहाँलाई भतिजा पर्ने युवराज लामा र राम लामाहरुले खाना पकाइदिने लगायतको हेरचाह गर्दै आउनुभएको थियो ।
‘उहाँलाई एक्लो भन्न मिल्दैन, हामी सबै कांग्रेस कार्यकर्ता उहाँका छोराहरु हौं ।’-बर्मा लामाले अनलाइनखबरलाई भन्नुभयो ।
जनजातिका अभिभावक हुनहुन्थ्यो : आनन्दसन्तोषी
नेपाली कांग्रेसभित्र आदिवासी-जनजातिको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुहुने आनन्दसन्तोषी राईका अनुसार भीमबहादुर जनजातिका अभिभावक हुनहुन्थ्यो । आफूहरुले पार्टीमा राखेको ११ बुँदे मागका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न नेपाली कांग्रेसले उहाँकै संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको सदस्यमा गगन थापा, नरहरी आचार्य, महेस आचार्य, लक्ष्मी राई लगायत हुनुहन्छ । ‘उहाँले तयार पार्नुभएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सकारात्मक थियो ।’-राईले अनलाइनखबरसित भन्नुभयो । राईका अनुसार कांग्रेस नेता तामाङले आदिवासी-जनतातिका सम्बन्धमा ‘पहिचान भेटिने, द्वन्द्व मेटिने’ नाराअघि सार्नुभएको थियो । तर, उहाँ एकल जातीय पहिचानको पक्षमा भने हुनुहुन्नथ्यो ।
नेपाली कांग्रेसभित्र तामाङ अध्ययनशील एवं चिन्तनशील नेता मानिनुहुन्थ्यो ।
पार्टीले पछिल्लो समयमा उहाँलाई राम्रो महत्व दिएको र आदर गरेको राई बताउनुहुन्छ । पछिल्लो समय सशांक कोइरालालगायतले भीमबहादुर तामाङजस्ता स्वच्छ व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने माग गरिरहेका अवस्थामा उहाँको अकस्मात् निधन भयो ।नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरु कुर्सीका लागि झगडा गरिरहेका र भ्रष्टाचार एवं विलासितातर्फ केन्दि्रत भइरहेका बेला भीमबहादुर जस्ता निस्वार्थी एवं त्यागी मानिस पनि राजनीतिमा थिए भन्ने उदाहरण अब इतिहास बनेको छ ।
अनबरत रूपमा नेपाली कांग्रेसको आदर्श, नीति र सिद्धान्तप्रति सदा निष्ठावान र समर्पित रही सोहि मार्ग मार्फत सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र,स्वतन्त्रता, त्याग एबं नैतिकताको पक्षमा निष्ठापूर्वक समर्पित, इमान्दार, सरल, त्यागी एवं व्यवहारिक आदर्श नेता परम आदरणीय भीम बहादुर तामांगको देहान्त भएको खबरले हामी अत्यन्त मर्माहत भएका छौ/ यस दुखद घडीमा वहाँको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोक संतप्त सबैमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौं साथै ऊहा बाट आज का सम्पूर्ण तह र तप्काका पिडी ,राजनेता ,विचारक ,एबं कार्यकर्ताले प्रेरणा लिई नीजी स्वार्थ बाट माथि उठेर देश र जनताको हितमा शान्ति र सहमति बाट अर्थपूर्ण टुंगो मा पुग्न प्रेरणा र शक्ति मिलोश भन्ने कामना समेत गर्दछौ !
मोहन चन्द्र बराल
नर्थ क्यारोलिना च्याप्टर